विराटनगर/ धेरै संख्यामा अस्पताल छन् । उतिकै संख्यामा क्लिनिक र ल्याब । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशकै दोस्रो ठूलो हब मानिएको विराटनगरमा होमियोपैथीक र आयुवेर्दिकका उपचार केन्द्रको पनि कमि छैन । अस्पताल, क्लिनिक र ल्याबको संख्या गनिसाध्य नभएपनि उपचारको विश्वसनियता दिलाउने प्रयोगशाला (ल्याब) को आधार कमजोर छ । क्लिनिकमा विशेषज्ञ चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन् तर ल्यावमा हुने परीक्षण टेक्निसियन र असिस्टेन्टकै भरमा चलिराख्या छन् ।
सुविधा सम्पन्न अस्पतालका प्रयोगशाला समेत भने जस्ता छैनन् । जिल्लाभर ६२ अस्पताल, ४५ ल्याब र १ सय ६२ क्लिनिक विधीवत सञ्चालनको प्रक्रियामा दर्ता छन् । गनिएका मध्ये उपचार विश्वशनियता पाउँदै आएका अस्पतालको संख्या न्यून हुनुको कारण प्रायः प्रयोगशाला नै मानिदैं आएको छ । जोडिएको सन्दर्भ वरिष्ठ विशेषज्ञ प्याथोलोजिष्ट डा.सागरराज पाण्डेको गुनासा हुन् । न्यूरो–कार्डियो अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशाला (ल्याब) मा कार्यरत डा.पाण्डे उपचारको आधार ल्याबको परीक्षणलाई मान्नुहुन्छ । लामो अनुभव र विशेषज्ञ समेत रहनु भएका पाण्डेसँग वि.पी.के.एच.एस. धरानमा कार्य गर्दादेखिको अनुभव छ ।
न्यूरो अस्पतालमा कार्यरत रहँदा समेत पाण्डे प्रयोगशालाको प्रमुखको हैसियतमा हुनुहुन्छ । जटिल समस्या भएका विरामीसँग जोडिएको ल्याबको परीक्षण पाण्डे आफैंले गर्नुहुन्छ । आफ्ना माहतहतमा रहेकाको भरले मात्रै पाण्डेलाई चित्त बुझ्दैन । ल्याब परीक्षणपछिको प्रतिवेदन हेर्ने र आशंका लागेमा पुनः परीक्षणमा लैजाने पाण्डेको विशेषता छ । प्रविधियुक्त न्यूरोको ल्याबमा अटो एनालाइजर छन् । प्रविधिले झुक्याउन सक्ने कुरालाई डा.पाण्डेले ‘म्यानुअल करेक्सन’ गर्नुपर्दछ ।
आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानमा रोगको पहिचानपछि औषधी सेवन गर्ने उपचार पद्धतीलाई मान्यता दिइन्छ । पहिचान नै गलत भए रोगिले सेवन गर्ने औषधी विष सरह मानिन्छ । त्यसैका लागि डा.पाण्डे अबिराम प्रयोगशालामा उपस्थिति हुनुहुन्छ ।प्रयोगशालाको विशेषज्ञ जनशक्तिको रुपमा जनरल प्याथोलोजी, हिस्टोलोजी/साईटोलोजी, माईक्रोबायोलोजी, हेमाटोलोजी र एमडी बायोकेमिस्ट्री छन् । योग्यता विशेषज्ञको हाँसिल गर्ने चिकित्सक भएको अस्पतालमा विशेषज्ञ प्याथोलोजी अनिवार्य हुन्छ ।
न्यूरो–कार्डियो अस्पताल विराटनगरलाई सफलताको शिखरमा पु¥याउन ल्याबमा विशेषज्ञ प्याथोलोजिष्ट डा.पाण्डे र प्रविधियुक्त प्रयोगशाला पनि कोशे ढुंगा सावित छन् ।
प्याथोलोजिष्ट डा. पाण्डेका अनुसार न्यूरो अस्पतालको ल्याबमा अटोमेटेड केमेस्ट्रि एनालाइजर, कोल्टर काउन्टर, अटोमेटेड हुमाटोलोजी एनालाइजर, अटोमेटेड इलेक्ट्रेड एनालाइजर, हर्मन एनालाइजर, अटोमेटिक टिस्यू प्रशोसर र माइक्रो बाइलोजीका आधुनिक प्रविधी मेशिनबाट ल्याव परीक्षण हुन्छ ।
रगत, रगतमा हुने रसायन, हर्मोन, थाइराइड, नशामा हुने इन्फेक्सन, कल्चर, पिप, खकार, हिस्टो प्याथोलोजी र साइटोलोजी जस्ता तत्वको परीक्षण हुने गर्दछ । त्यस बाहेक क्यान्सरका विरामीको बायोस्पी समेत हुने गरेको छ । प्रविधियुक्त ल्याबमा दक्ष जनशक्ति हुनु पनि उतिकै जरुरी छ । ल्याब परीक्षणको प्रतिवेदन वा रेडियोलोजीको प्रतिवेदन चिकित्सकका लागि औषधी सिफारिस गर्ने आधारहुन् । त्यति मात्रै नभई विरामीको रोगको पहिचान गर्ने मुख्य आधार समेत यिनै मानिन्छन् ।